Kuqubuke impi enkulu phakathi kweqembu le-ANC ne-EFF | Scrolla Izindaba
Kuqubuke impi enkulu phakathi kweqembu le-ANC ne-EFF
ANC and EFF councillors got into a fist fight on Tuesday morning. This comes after an EFF councillor voted with the IFP which led to ANC loding UMhlathuze Local Municipality.#RealNewsForMobile pic.twitter.com/LTbQG2a9NV
— Scrolla Africa (@ScrollaAfrica) November 23, 2021
Lishawe kabuhlungu ikhansela le-ANC e-Richards Bay ngemuva kokutholana phezulu namakhansela e-EFF.
Lesi sigameko esishaqisayo senzeke ngoLwesibili ekuseni ngemuva kokuthi i-ANC ihlulwe kanzima yi-IFP emkhandlwini waseMhlathuze. Umhlangano uhlehliselwe uMsombuluko kulandela ukunqoba kukaLulamile Mapholoba obengenele isikhundla sikaSomlomo we-IFP.
Banqabe ukuvuma ukuthi bahluliwe, amanye amakhansela e-ANC athatha izintambo zokuyiguqula imiphumela. Bazama nokucekela phansi imiphumela ebibhalwe ephepheni elibekwe phambi kukaMapholoba ongumphathi womkhandlu.
Ngemuva kwalokho amakhansela e-ANC aphakamisa amaphuzu amaningi ngethemba lokuthi uMapholoba uzohoxa ekuphatheni umkhandlu. Kwagcina kuvunyelwane ngokuthi bazophinde bahlangane ngoLwesibili.
Njengoba umkhandlu ubuyisela izikhala zawo ngoLwesibili, ikhansela le-EFF uMnumzane uNkosingiphile Mthembu uxwayise amakhansela e-ANC ngokuthi uma eqhubeka nokungaziphathi kahle bazowalungisa.
“NgoMsombuluko kuphoqeleke ukuthi uhlehliswe umhlangano ngenxa yokungahleleki kwenu, niyehluleka ukwamukela ukuthi anisawuphethe lo masipala, sesikhathele amaqhinga enu,” kusho uMthembu.
Kodwa lesi sexwayiso asizange sizwakale njengoba amakhansela amaningi e-ANC eqhubeke nokuphazamisa umhlangano.
Kwagcina kuqubuke ingxabano kwashaywa ikhansela le-ANC ebusweni kwabe sekuqhubeka impi phakathi kwamakhansela e-ANC ne-EFF.
Umthombo utshele i-Scroll.Africa ukuthi ikhansela elishayiwe belilisha futhi alimazi uMthembu.
“Iningi lethu liyamesaba uMthembu ngoba ungumuntu onganqeni ukukunika isibhakela. Yingakho amakhansela e-ANC enqume ukwehlisa umoya emuva kokuthi uMthembu esukume ewaxwayisa ngokuphazamisa umhlangano womkhandlu,” kusho umthombo.
Udokotela uNkonzoyakhe Donda oqokelwe kwesobumeya ku-IFP uqokwe ngaphandle kokuphikiswa kumasipala waseMhlathuze kwathi owe-EFF uMnumzane uNkululeko Nkonyane wakhethwa njengephini lemeya.
EMnambithi ngaphansi kukamasipala i-Alfred Duma kuphinde kwaqubuka enye impi lapho ikhansela labantu kuzwelonke uMnumzane uNathi Mthethwa lishaywe kanzima isivakashi se-IFP. NjengaseMhlathuze umgilwa kuthiwa ucasulwe ukuhleleka kukaMthethwa.
UMthethwa uthe usevule icala lokushaya, kanti uColonel Thembeka Mbhele wamaphoyisa KwaZulu-Natali uthe basaluphenya lolu daba.